Ogbe East African ewepụtara njem nlegharị anya n'ime mpaghara ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Ogbe East African ewepụtara njem nlegharị anya n'ime mpaghara ọhụrụ
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Sustainability News • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ogbe East African weputara mbanye njem nlegharị anya n'ime mpaghara
A na-atụ anya mkpọsa ahụ ka ọ ga-aga n'ihu ruo izu atọ, site na Disemba 1, 2021. Ọ bụ akụkụ nke mmejuputa atụmatụ EAC Tourism Marketing Strategy na EAC Recovery Plan nke German Development Agency, GIZ kwadoro.
The Obodo Ọwụwa Anyanwụ Africa (EAC) ewepụtala Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Mpaghara na Ime Nleta nke EAC setịpụrụ iji kwusaa saịtị na ọrụ ndị njem nlegharị anya nke mba na mpaghara, na-achọ ịkpali na ịzụlite njem n'ime mpaghara.
Ewebere ya n'izu a, mkpọsa "Tembea Nyumbani", ma ọ bụ "Nleta Ụlọ" na-achọ ịdọta ụmụ amaala East Africa ịga njem na mba nke ha, na gburugburu mpaghara, na mbọ iji maliteghachi njem nlegharị anya nke ụlọ na mpaghara n'ofe mpaghara East Africa, n'etiti. oria ojoo nke COVID-19.
Mgbasa ozi a ka atọrọ ka ọ gaa n'ihu ruo izu atọ, site na Disemba 1, 2021. Ọ bụ akụkụ nke mmejuputa atụmatụ EAC Tourism Marketing Strategy na EAC Iweghachite Atụmatụ na-akwado. Ụlọ ọrụ mmepe German, GIZ.
EAC Secretariat malitere mgbasa ozi a n'isi ụlọ ọrụ ya na Northern Tanzania obodo njem nlegharị anya nke Arusha.
Njem nlegharị anya na-atụnye ụtụ nke ukwuu na akụ na ụba nke EAC Partner States na tupu ọrịa ọrịa, nyere 10 pasent nke Gross Domestic Product (GDP), 17% ego mbupụ na 7% n'ime ọrụ.
Ọrịa COVID-19 hụrụ na mpaghara ahụ emetụtara nke ọma na ndị njem nlegharị anya mba ụwa batara East Africa na-agbadata ihe dịka 67.7%, na ihe ruru nde mmadụ 2.25 bịarutere na 2020 ma e jiri ya tụnyere nde 6.98 na 2019.
EAC Odeakwụkwọ ukwu Dọkịnta Peter Mathuki agbaala ndị na-eme njem n'onwe ha ume ka ha gbatịa ndị East Africa ngwugwu ọnụ ọnụ iji rata ha n'iji ohere ezumike dị n'oge mmemme na-abịa.
"Site n'ụgwọ ntinye ego na ọnụego ugbu a agbatịkwuru ụmụ amaala EAC, ọ bụ oge maka ndị East Africa inyocha omenala dị iche iche, na-aga njem njem njem na ịga leta osimiri ndị mara mma n'etiti ohere ndị ọzọ mpaghara ahụ nwere inye", Dr. Mathuki kwuru n'oge mgbasa ozi. mmalite emere n'isi ụlọ ọrụ EAC dị n'Arusha etiti izuụka a.
Dr. Mathuki gara n'ihu kwuo nke ahụ EAC ewepụtala EAC Pass nke jikọtara ma kwado ule COVID-19 na asambodo ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa maka steeti ndị mmekọ EAC iji mee ka njem dị na mpaghara ahụ dị mfe.
Ndị EAC na-eme mkpọsa Tembea Nyumbani na mmekorita ya na East African Tourism Platform nke na-anọchite anya azụmaahịa njem nlegharị anya n'ofe mpaghara ahụ.
Site na mkpọsa ahụ, a na-agba ndị na-anya ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ndị ọzọ na-ahụ maka njem nlegharị anya ka ha kwalite ngwugwu dị ọnụ ala nye ụmụ amaala EAC.
N'akụkụ nke ya, onye isi EAC na-ahụ maka ngalaba na-emepụta ihe, bụ maazị Jean Baptiste Havugimana kwuru na EAC na-agba mbọ n'ịhụ na mba niile EAC Partner States nakweere Visa Single Tourist.
"Sectoral Council on Tourism and Wildlife Management n'oge nnọkọ pụrụiche ha mere na Julaị afọ a tụrụ aro ka ụlọ ọrụ Secretariat kpọkọta ọgbakọ dị iche iche nke gụnyere akụkụ ndị bụ isi dị ka njem nlegharị anya na anụ ọhịa, mbata na ọpụpụ na nchekwa iji mepụta usoro maka iwebata Otu onye njem nlegharị anya nke mba ndị mmekọ niile, "o kwuru.
Maazị Havugimana kwuru na a ga-akpọkọta nzukọ a na mbido 2022, na-agbakwụnye na ozugbo ịnakwere Visa ahụ n'ụzọ zuru ezu ga-eme ka ndị njem nlegharị anya si mba ọzọ kwụsị njem n'ofe mpaghara ahụ dum.
Ọzọkwa, onye isi EAC Tourism Officer, Mazị Simon Kiarie, kwuru na EAC na-arụ ọrụ nke na-eji ike njem nlegharị anya mgbalị ma na mpaghara na mba larịị; mpaghara ahụ ga-enwe ike ịnata ndị njem nlegharị anya nde anọ n'afọ na-abịa.
Ọ gbakwụnyere, "Mgbake ngalaba njem nlegharị anya anọwo na-arị elu ma anyị na-atụ anya na n'afọ 2024, anyị ga-enweta ihe dị ka nde ndị njem nlegharị anya 7 ma e jiri ya tụnyere nde ndị njem nlegharị anya nde 2.25 edere na 2020", o kwuru.